Kedu ihe bụ ihe ngosi na ihe ọ bụ maka | Netwọk Mgbasa Ozi
Gịnị bụ ihe ngosi
Ihe eserese eserese na eserese esiteghi na aka oge niile dika nke di taa. Tupu mmepe nke ihe osise oge a, ihe mbụ ejiri mee ihe maka igodo bụ chaatị ndị na-enye nkọwa. Nke a ka a kpọrọ Portulan. Chaatị ndị a na-agagharị agagharị dị ezigbo mkpa na narị afọ nke iri na anọ na nke iri na ise nyere mkpa ha nwere na ahia.
N’isiokwu a anyị ga-akọwa ihe Portula bụ na ihe dị mkpa n’oge gara aga.
1 Gịnị bụ ihe ngosi
3 Ofdị portulan
3.1 Portulan nke Italy
3.2 Ọdụ ụgbọ mmiri Majorcan
3.3 Portulans nke Portuguese
Ndị a bụ maapụ ngagharị nke dị n'oge ochie na nke nyere nnukwu azụmaahịa. Enweghị GPS Satellites dị ka ndị anyị nwere taa, igodo dị mgbagwoju anya karị. Iji bufee ngwongwo site n'otu ebe ruo ebe ọzọ nke oke osimiri kewara, a ga-amata ụzọ ụgbọ mmiri kachasị ọsọ na ihe niile a ma ọ bụ ibikọ ọnụ nke ọdụ ụgbọ mmiri na-akwado.
Karịsịa na Oké Osimiri Mediterenian ịdị adị nke Portulans bụ ihe dị mkpa iji nwee ihe ịga nke ọma ebe ọ na-eme ka ndị ọkwọ ụgbọ mmiri jiri ụzọ ha na-eme ihe na inwe ike ịchọta ebe dị n'agbata ọdụ ụgbọ mmiri na akara ngosi kachasị mkpa. Site na ụlọ ọrụ ndị a enwere ike ịbawanye ahia ngwa ngwa.
Ọ bụrụ na anyị elee anya na ọdụ ụgbọ mmiri anyị ga-ahụ na ọ nwere ọdịdị nke maapụ nkịtị na nke ugbu a. Otú ọ dị, anyị nwere ike ịhụ na ọ nwere ọdịiche dị mkpa. Nke mbu bu na kama ndi yiri ya na ndi merid nwere uzo nke neme ihe metutara akara compass. Mbido nke myirịta na ndị media bịara mgbe e mesịrị na iwebata ihe osise nke oge a.
N'aka nke ọzọ, ọ bụ ezie na ọ bụ map ọnụ ọgụgụ, a na-egosipụta ebe dị anya na egwuregwu.
N'ime map ochie ndị a, e nwere eserese n'ụsọ osimiri nke ọdụ ụgbọ mmiri ndị ahụ dị n'ụzọ kwesịrị ntụkwasị obi nye eziokwu. Ọ bụ eziokwu na ọ bụrụ na i legide anya nke ọma ị ga - ahụ etu ihe ọghọm dị n’akụkụ osimiri si emebiga ihe ókè. Otú ọ dị, e mere nke a iji kpachara anya iji dọọ ụgbọ mmiri aka ná ntị na ịkpachara anya mgbe ha ruru n'ikpere mmiri.
Akụkụ ọzọ nke Portulans bụ na agbakwunyere ọtụtụ ihe eji achọ mma na nhazi nke nyere ozi ala, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, akụkọ ihe mere eme na sayensị. Ọmụmaatụ, enwere ụfọdụ oge mgbe ị hụrụ mpaghara ụfọdụ na-enyochaghị. Ndị na-ese ihe osise mere nke a dabere na nkwenkwe ha na echiche ha nke ndị amamihe nke oge ahụ. Nke ahụ bụ, enwere ike inwe ala batara n'ime ihe ngosi na-enweghịrịrịrị ịdị adị.
Eserese Portulan ndị a bụ akwụkwọ dị mkpa bara uru na nke akụ na ụba kemgbe ọtụtụ narị afọ. Ọ dị mma maka ndị ohi ịchọta ebe ịwakpo ma ọ bụ akụ zoro ezo. A na-ahụta ha dị ka ihe akpọrọ akpọrọ ma nwekwaa uru karịa ịdị egwu na ịchọ mma karịa maka uru ha bara. Dị ka na-atụ anya, ha abụghị ndị 100% ziri ezi, ya mere ha afọ cartographic uru bụ nnọọ ala mgbe tụnyere ugbu a map.
E nwere ụdị esetịpụ dị iche iche dị ka obodo si malite. E kewara ha na ato ato ato dika ebe emere ha: anyi nwere ndi Portulans nke ndi Italia, Mallorcan na Portuguese. Anyị ga-enyocha ha n'otu n'otu ma mara njirimara ya niile.
Portulan nke Italy
Ha bụ ndị emere na ọkachasị na Genoa, Venice na Rome. Ndị a bụ eserese ụgbọ njem kacha ochie nke ka dị na Ọbá Akwụkwọ Mba Paris. A na-akpọ eserese ọdụ ụgbọ mmiri kacha ochie Pisan Chart. Ndị ọzọ Portulans whotali bụ ndị ama ama Akwụkwọ ozi Carignano (ugbu a achọtabeghị ya, ọ na-efu efu), yana akara ngosi ndị ọzọ nke Genoese Pietro Vesconte, Beccario, Francisco Pizigano, Canepa na ụmụnne Benincasa mere.
Ọdụ ụgbọ mmiri Majorcan
Portulans ndị a gbakwunyere ụfọdụ akwụkwọ akụkọ ọhụrụ dị ka eserese na-eserese maka ekele nke okike Majorcan Jew Omenala Abraham. Ọrụ kacha mara amara nke onye Juu a bụ maapụ ụwa emere na 1375. Anyị ga-eburịrị n'uche uru dị na ịme maapụ ụwa n'oge Satellites nke artificial adịghị adị ma ọ bụ na enwere ike iji otu teknụzụ nyocha ya dịka nke anyị nwere taa .
Emebere maapụ ụwa a na tebụl iri na abụọ nke mpịakọta meghere ibe ha. A na-echekwa nke taa n'ọbá akwụkwọ mba dị na Paris. Ọ bụ oge mbụ na enwere ike ijide ọnụọgụ ozi niile dị na kọntinenti, ọkachasị nke Asia ma na ọ ruru Europe n'ihi ndị na-eme nchọpụta dịka Marco Polo, Jordanus na ndị ọzọ.
Portulans nke Portuguese
Emepụtara eserese eserese ndị a dabere na nke ndị Majorcan. Ha nọrọ obere oge n’aghọghị mgbe ochie mgbe nchọpụta ndị Spen na Portuguese na-achọ mkpa ka ukwuu nke Portulans ochie a nwere ike ikpuchi.
N'otu oge akụkọ ihe mere eme, eserese eserese Portulan ndị ọzọ n'ime ụwa Arab. Akwụkwọ ozi ndị a lekwasịrị anya n’Oké Osimiri Mediterenian. N’otu n’ime ha, nke ghọrọ otu n’ime ebe ndị a kasị mara amara, ụfọdụ ókèala America ndị a chọpụtara n’oge na-adịbeghị anya ga-anọchi anya ha. Anyị na-ekwu maka maapụ Piri Reis na 1513 (anyị chetara na achọpụtara America site n'aka Christopher Columbus na 1492). I nwekwara ike ịchọta ala ndị a na-enyochabeghị mana akọwapụtara ikwesị ntụkwasị obi nye eziokwu.
Uru nke map ndị a dị n'inye ụfọdụ ọrụ na kompas. Abịa na ịgagharị, ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịmara Ntuziaka nke anyị ga-aga, mana ọ kachasị mkpa ịmara ebe njedebe. Anyị nwere ike iji onwe anyị tụgharịa site na nghazi nke compass iji mara ebe anyị nọ ma ọ bụ ụzọ anyị na-aga. Otú ọ dị, iji ihe compass na ụzọ ụgbọ mmiri eme ihe, bụ ihe mere ka ndị na-akwọ ụgbọ mmiri nwee ike iru ebe a chọrọ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọdụ ụgbọ mmiri ahụ nyeere ọtụtụ aka iji melite azụmaahịa n'oge ahụ. Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere eserese eserese ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Gịnị bụ ihe ngosi
Obere mbara ala